Haddii aad ku jirtay muddo dheer qalab macruufka user, waxay u badan tahay in inta badan ee aad ururinta music digital waxaa duudduubeen in Lugood. Haddii aad qorshaynaysid in aad u guurto daaqa cusub aallada Android, ma aad u baahan doontaa in aad dib u ururinta aad qaali music in lagu kaydiyaa maktabadda music Lugood noqon. Inkastoo aysan Lugood loogu talagalay Android, waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan si aad u hesho jeexdin on by synching Lugood leh Android.
Dhibaato soo food saartay dadka Android Users Isticmaalka Lugood
Tan iyo Lugood waa codsi rasmi ah ee Apple, waxa uu noqonayaa mid herdamaysay galayo dadka isticmaala Android in ay wadaan Lugood iyada oo qalabka ay. Qaar ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta in la isticmaalayo Lugood mariyo qalabka Android ku qoran yihiin hoos:
• Ka dib hordhaca ah ee Lugood Plus, waxaad ka ciyaari kartaa kaliya music ee ku saabsan qalabka Android oo la iibsaday ka Lugood qaab AAC. Dhammaan files music kale la qaabab file kala duwan waa in la la casriyeeyay si qaab Android-socon for $ 0.30 per file music.
• Dhammaan files video in ay yihiin kiro ah ama gatay Lugood ay Digital Rights Management (DRM) Xaddididda maldahan dul Apple. Tan iyo markii ay Android ma Taageer Apple ee DRM, faylasha video ma ciyaaro qalabka Android. Si kastaba ha ahaatee, videos la qabtay iyada oo camera casriga ah ee ku jira Android ay taageerayaan qaab sidaas waxaa laga daawan karaa iyada oo aan la xadeyn.
• Sida Mac version of barnaamij guul ku ordi Windows, sidoo kale aadan ordi karaan barnaamijyadooda macruufka on qalabka Android aad.
• buugaagta Reading in la iibsan karo ka iBookstores Apple ee waa ma-tagto Android isticmaala iyo waliba.
The Best Lugood Saaxiibkii u Android - Wondershare TunesGo
TunesGo by Wondershare waa tan Saaxiibkiis ugu fiican ee qof isagoo qalabka Mac iyo Android waqti isku mid ah. Iyadoo TunesGo aad caraf karo dhadhan kasta oo Lugood iyada oo qalab Android iyo ka fogaadaan dhibaatada uu keeno haddii kale. Software jebiyo ooday ee aan waafaqsan waadna ku isticmaala Android ku dhaqaaqaan Lugood sida qalab macruufka ah.
Wondershare TunesGo qaababka sida soo socda:
• Si fudud u hagaagsan oo dhan files warbaahinta ka Lugood si toos ah qalab Android aad.
• nidaameed macluumaadka ku kaydsan gudahood metadata ee files warbaahinta sida fanaaniinta, magaca, album cover farshaxanka, iwm
• Xogta Transfer sida farriimaha, xiriirada, sawiro, iwm dhexeeya adiga qalabka Mac iyo Android la habka jiitaa-iyo-hoos u fudud.
• Waxaad u hagaagsan kartaa macluumaad oo dhan lumay ka qalab Android dib ugu soo noqoto Mac ay dhacdo in maktabadda Lugood aad u lumiya xogta.
• Hel casriyaynta oo lacag la'aan ah ee Meyeydaan si aad weli updated la qaababka cusub iyo hawlaha in qoraalkii ugu dambeeyey ayaa laga yaabaa in.
Waxaad isticmaali kartaa Lugood in qalab Android adiga oo isticmaalaya TunesGo Wondershare. Si tan loo sameeyo waa in aad u hagaagsan Lugood iyo qalab Android kasta oo kale. .Wadashaqayntaas Ayaa awood kuu siinayaa in ay si fudud ku wareejiso files warbaahinta iyo xog kale oo ka Lugood ay u qalab Android iyo ku xigeenka qeybsanaan.
Si aad u hagaagsan Lugood maktabadda ka Mac si ay Android:
1. bixi iyo rakibi TunesGo Wondershare ku saabsan qalabka Mac.
2. Burcad codsiga lagu rakibay.
3. Guji ka nidaameed tab ka qaybta dhexe ee interface ka.
4. Laga soo nidaameed uu furmo suuqa, dooro Lugood nidaameed in Android doorasho.
5. Laga soo fursadaha balaariyay heli karo, dooro fayl ah in aad rabto in aad u hagaagsan ka Lugood in Android.
Fiiro gaar ah : The Dhan Library doorasho la doorto by default. Waxaad ka bixi kartaa sida ay tahay haddii aad rabto in aad u hagaagsan oo dhan aad maktabadda Lugood leh qalab Android aad.
6. Marka aad calaamad u fayl tarin, riix nidaameed button ka hoose ee interface ka.
Fiiro gaar ah : Badhanka ayaa nidaameed la helo oo kaliya in iibsatay (version buuxa) nuqul ka mid ah codsiga.
Fiiro Gaar ah : Waxa kale oo aad u hagaagsan kartaa qalab Android si aad u Lugood doorataa nidaameed Android inay Lugood doorasho ka nidaameed uu furmo suuqa.
Marka aad Lugood iyo qalab Android synched wada, waxaad bilaabi kartaa wadaago files ka dhexeeya iyaga.
Si files ka Lugood wareejiyo Android:
1. Wondershare TunesGo ee interface, hubi in aad tahay ku Jiid & dejinta tab.
2. Dooro files warbaahinta maktabada Lugood aad in aad rabto in lagu wareejiyo si aad qalab Android.
3. Jiid faylasha soo xulay Lugood iyo iyaga hoos u furay Jiid & dejinta qaybta suuqa kala TunesGo ah.
4. Waxaad ka arki kartaa horumarka synching ee files hoos Horumarka tab.
Wondershare TunesGo sidoo kale kuu ogolaanaya in aad ku xidhi iyo toggle u dhexeeya qalabka kala duwan oo isku mar ah. Sababo la xiriira oo dhan, kuwaas oo feature, codsiga kasbatay ka ratings xiddiga ugu sareeya ka dhamaadka isticmaala waxaa ka mid ah asaxaabta ugu wanaagsan ee qalabka Android inay hagaagsan oo Lugood samaynta.
Top 10 ROMS Android iyo Maareeyayaasha ROM Android
> Resource > Android > The Best Lugood Saaxiibkii u Android